Ihe dị mma - Shandong Better Motor Co., Ltd.
Better Motor mepụtara site na moto ogbako nke Shandong Fada Group Corporation, nke bụ ụlọ ọrụ gọọmentị. Shandong Fada Group Corporation guzobere na 1976, nke bụ onye ọsụ ụzọ nke onye na-akwado elektrọnik na onye na-ehicha ihe na China.
Na 1980s, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara usoro nke mmiri na mmiri na-ehicha mkpocha si ụlọ ọrụ ELECTROSTAR si Germany, webata usoro mmepụta usoro nke ụgbọ ala si USA, Japan na Switzerland. Ọ bụ ụlọ ọrụ mbụ na China nke rụpụtara ọtụtụ igwe.
Mgbe ọ gụsịrị ma na-amịkọrọ ihe ndị dị elu na teknụzụ na akụrụngwa maka ihe karịrị afọ 10, ọ gara nke ọma mepụtara usoro igwe maka nrụgide dị elu kama ịbubata otu na 1999. Na Eprel 2000, Longkou Better Motor Co., Ltd nwere ihe ịga nke ọma debara aha nke bụ nke onwe ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa. Na Sep. 2005, ụlọ ọrụ ahụ gbanwere aha Shandong Better Motor Co., Ltd.